Elite 3, Jabra ikhtiyaarkeeda ugu jaban, waxay ilaalisaa tayada [Dib u eegis] | Warka gadget
Gacan ku haynta furitaanka Jabra Elite 7 Pro Waxaan halkan ku falanqeynay Actualidad Gadget dhawaan, beddelka ugu jaban ee buug-yaraha Jabra ilaa maanta ayaa yimid, waxaan ka hadalnay sida aysan u noqon karin mid kale oo ku saabsan Elite 3, oo ah nooca 'xakamaynta'' oo wali ah badeecad Jabra ah oo leh dhammaan kuwa ka mid ah sharciga.
Waxaan si qoto dheer idiinkugu soo gudbinaynaa falanqeyn ku saabsan Jabra Elite 3 oo ah nooc leh madax-bannaani weyn iyo iska caabin biyo leh oo leh codka ugu wanaagsan. naga hubi iyaga si aad u ogaato waxa Jabra madax-madaxeedka ugu jaban ay bixiyaan ilaa maanta.
3 Jabra Sound + waa in uu leeyahay
4 Iska caabin iyo raaxo
5 Madax-bannaanida iyo ra'yiga isticmaalka ka dib
Xagga muuqaalka, sida inta badan madax-madaxeedyada Jabra, line design ee shirkadu waa la ilaaliyaa, alaabooyinka raaxada iyo codka si cad uga sarreeya wax kasta oo kale. Sidan oo kale, Jabra waxay sii wadaa inay ilaaliso qaababkeeda gaarka ah in kasta oo laga yaabo inaysan u muuqan kuwa ugu quruxda badan suuqa, waxay leeyihiin sabab ay u noqdaan, taas oo horayba uga badan waxa soo saarayaasha intooda badani ay sheegi karaan.
Cabbirrada Taleefanka dhegaha: 20,1 × 27,2 × 20,8mm
Cabirka Kiis: 64,15 × 28,47 × 34,6mm
Kiisku, dhankiisa, wuxuu hayaa naqshadeynta iyo cabbirka astaanta, qaabka "pillbox" oo aad ugu badan Jabra kaasoo, sida taleefoonnada dhegaha la gashado, diiradda saaraya kaliya waxqabadka iyo cimri dhererka. Munaasabadan, oo ay rabeen inay "hal-abuuraan" Jabradani waxay si sax ah ugu jirtaa midabada kala duwan, halkaas oo marka lagu daro dahabka madow iyo iftiinka caadiga ah, waxaan awood u yeelan doonaa inaan galno nooca buluugga badda iyo mid kale oo guduudan khafiif ah. Indho-qabasho. IYOQaabka lagu falanqeeyay kiiskeena waa madow, oo ay ku jirto xirmada: Lix barkimo dhegta oo silikoon ah (tirinta kuwii hore ugu xidhnaa dhegaha dhegaha), kiiskii dallacaadda, fiilada USB-C, iyo dhegaha dhegaha.
Waxaan haynaa taleefoonnada gacanta oo leh oo leh darawallo (kuwa hadla) oo ah 6 millimitir, tani waxay siinaysaa iyaga oo ku salaysan faahfaahinta farsamada 20 Hz ilaa 20 kHz bandwidth ee dib-u-ciyaarista muusiga iyo laga bilaabo 100 Hz ilaa 8 kHz marka aan ka hadlayno wada hadalka telefoonka. Iyadoo la raacayo kuwa aan kor ku soo sheegnay, waxay leedahay afar makarafoon oo MEMS ah oo naga caawiya inaan joogteyno wada sheekaysiga cad, wax sidoo kale caan ku ah Jabra. Xadhkaha xawaaladaha makarafoonadu waa inta u dhaxaysa 100 Hz iyo 8 kHz, sida aynu ku soo aragnay tafaasiisha la xidhiidha xadhkaha xadhkaha telefoonada.
Miisaanka kiiska: 33,4 garaam
Miisaanka sameecadaha: 4,6 garaam
Qualcomm aptX ee codka HD
Halkeen ka iibsan karaa Jabra Elite 3 oo ah qiimaha ugu fiican? Gudaha LINKAN.
Marka la eego heerka isku xirka, taleefoonnada gacanta waxay leeyihiin Bluetooth 5.2 kaas oo profiles-yada ugu caansan lagu dabaqo A2DP v1.3, AVRCP v1.6, HFP v1.7, HSP v1.2, oo leh noocyo kala duwan oo isticmaalka caadiga ah ee 10 mitir iyo suurtogalnimada xafidida ilaa lix qalab. Sida iska cad, natiijada isticmaalka Bluetooth 5.2, waxay leeyihiin nidaam shid otomaatig ah marka aan ka saarno sanduuqa iyo xidhid toos ah sidoo kale marka ay yihiin 15 daqiiqo xidhiidh la'aan ama 30 daqiiqo bilaa hawl.
Jabra Sound + waa in uu leeyahay
Codsiga Jabra waa software-ku-kordhinta oo noo ogolaanaysa inaan samayno hagaajinta lagama maarmaanka ah, oo dhaafsiisan badhamada farsamada ee laga helo taleefannada dhegaha-dhegaha iyo inaan ku habayn karno sidaan doono codsigaaga, Waxaan leenahay awoodaha sinnaanta iyo sidoo kale cusboonaysiinta softiweerka ka dhigaya softiweerkaaga mid qiimo leh oo awood u leh inuu go'aansado inuu iibsado. Codsigan, oo la jaan qaadaya aaladaha Android iyo iOS labadaba, wuxuu kuu oggolaanayaa inaad sameyso tiro wanaagsan oo qaabeyn ah oo mudan in la isku dayo sababo badan.
Sidan, waxaan kugula talineynaa inaad dhex marto mid ka mid ah fiidiyowyada aan ku falanqeynay aaladaha Jabra waqtiyo kale si aad u ilaaliso waxqabadka Sound +, codsigan Jabra oo gabi ahaanba xor u ah in la soo dejiyo.
Iska caabin iyo raaxo
Xaaladdan oo kale waxaan leenahay iska caabin biyaha iyo firidhsan leh shahaadada IP55, tani waxay noo dammaanad qaadaysaa ugu yaraan inaan awood u yeelan doono inaan u isticmaalno roobka iyo sidoo kale marka aan sameyneyno tababarka. Arrinkan, Jabra waxa ay ilaalisaa halbeegga tayada, sida aynu sheegnayba. Waxaan wajahaynaa badeecada ugu raqiisan ilaa hadda ee ku jirta buug-yaraha shirkadda.
Si la mid ah, heerka hagaajinta tayada isku xirka iyo raaxada isticmaalka, Jabra Elite 3 waxay leeyihiin saddex isku-dhafan oo software dhinac saddexaad ah oo xiiso leh oo nolosheena fududeyn kara:
Google Fast Pair, oo loogu talagalay lamaanayn buuxda iyo ka shaqaynta aaladaha Android iyo Chromebook ee ku habboon.
Spotify Taabo, si loo hagaajiyo oo loo habeeyo qaabeynta badhamada marka aan isticmaaleyno madal dib-u-ciyaarista Spotify.
Isku-dhafka Alexa si uu sidoo kale ula falgalo kaaliyaha farsamada ee Amazon.
Madax-bannaanida iyo ra'yiga isticmaalka ka dib
Jabra waxa ay na siisay xog la isku halayn karo oo ku saabsan mAh batteriga, wax caan ku ah astaanta, si kastaba ha ahaatee Waxay saadaaliyaan 7 saacadood oo madax-bannaani ah oo leh kharash iyo ilaa 28 saacadood haddii aan ku darno eedaha lagu soo oogay kiiska. Shirkaddu waxay sidoo kale noo ballan qaadaysaa in toban daqiiqo oo keliya lagu dallaco aan heli doono ku dhawaad ​​hal saac oo isticmaal ah. Xogtan waxaa lagu soo saaray ku dhawaad ​​​​dhammaan imtixaanadayada, gaar ahaan iyadoo la tixgalinayo inay ka maqan yihiin joojinta dhawaaqa firfircoonida (ANC) iyo ilaa iyo inta aynaan isticmaalin habka HearThrough ee horeyba looga heli karo ku dhawaad ​​dhammaan aaladaha Jabra ee kala duwan.
Tayada dhawaaqu aad bay u wanaagsan tahay markaad tixgeliso qiimaha, heerka tayada ee lagu hayo Jabra waqti ka dib, waana taas. Kuwan Elite 3 waxaa lagu heli karaa wax ka yar 80 euro dhibcaha iibka caadiga ah, iyaga oo ka dhigaya doorasho wanaagsan kuwa raadinaya inay iibsadaan badeecad Jabra markii ugu horreysay ama ay haystaan ​​beddelka munaasabadaha "gaar ah". Shaki la'aan, sida had iyo jeer, Jabra waxay u suurtagashay in ay samayso badeeco aan fasiraad lahayn oo bixisa waxa ay bixiso.
Ku dhejiyay: December 20 ee 2021
Wax ka badalidii ugu dambeysay: December 11 ee 2021
Tayada codka iyo awooda aad u wanaagsan
Cadaynta wicitaanada telefoonka
Qiimaha dhexdhexaadka ah ee Jabra
Naqshadayntu waxay noqon kartaa mid go'aan qaadata
Ma jiraan suufyo raaxo leh
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Reviews » Elite 3, Jabra ikhtiyaarkeeda ugu jaban, waxay ilaalisaa tayada [Dib u eegis]